Isbarbardhigga 7 Popular Music Goobaha si Spotify
Model Ganacsiga ee music geeyo online noqotay mid aad u shaqayn karta iyo toban kun ah shirkadaha ku abuuray dhufto xarrago iyo tayada ka taas oo ay u soo bixi music aad ugu jeceshahay. Brand ugu caansan ee ganacsiga waa shaki la'aan ah, Spotify. Muddo dheer ay haysteen cadaadiska qaar, waxayna ku xiran tahay meesha aad juquraafi ahaan ama inta jeer ee aad ciyaari karo track gaar ah. Sababta oo ah kuwa xayiraad, users badan oo doortay in la raadiyo xal kale kale si ay u qanciso baahidaada music ay. Qaar kale waxay si fudud u doonayaan in laga yaabo in ay ku sahamiyaan fursadaha kale. Marka laga sababaha aad, liiska soo socda waa dhadhamin waxa aad sugaya halkaas Internet-ka.
Rdio VS Spotify Deezer VS Spotify 8tracks VS Spotify Soundcloud VS Spotify YouTube VS Spotify MySpace VS Spotify Grooveshark VS Spotify TunesGo - download Spotify iyo music geeyo free
Iyadoo in ka badan 20 milyan oo heeso iyo in la heli karo 152 dal, Rdio sameynayo jar badan ee ganacsiga online geeyo music.
Waxay sidoo kale u oggolaadaan in aad sii dhexgalaan adeega la Facebook si aad iyo saaxiibadaa in aad raacdo dhadhan kasta oo kale ee muusiga.
Wareegga culus oo wax yaabahan kuu ogolaanaya in aad si aad u aragto waxa ay bulshada Rdio ah waan ku maqlayaaye.
Marka aad bilowdo in aad raacdo dadka kale ee, waxaad arki doontaa avatars ay albums ay wax maqlaynno ama kuwa ay ku badbaadi hoose. Tani waa muujinta kale nifty si ay kaaga caawiso in la ogaado music dheeraad ah.
Rdio sida Deezer taageertaa dhammaan dhufto.
Sida Spotify waa adeeg xayaysiinta taageerto, laakiin ma aan xad lahayn, oo sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa inaysan soo jiidan qof walba.
Dooq kale oo Spotify in uu sameeyay leeway badan ee Europe waa goobta geeyo music Faransiis loo yaqaan Deezer. Iyadoo buugga badan oo kuwan raadkaygay la heli karo si dhow dal kasta oo aduunka ka, adeeg geeyo music tani waa u tartamaya dhab ah Spotify.
Waxay taageeraan ku dhowaad madal kasta bilabo, sidaas ogolaanaya xoriyadda badan ee meesha iyo sida webiyo mid ka mid ah ayaa music.
Waxay leeyihiin feature Smart Radio in customizes aad waayo-aragnimo u dhegeysanaya sida si aad u dhadhan in music oo soo jeedin doona jidadka cusub ee laga yaabo inaad ku raaxaysato, fog ka xoogbadan badan Spotify ee sidaas samaynaya.
Sida Grooveshark, waxaad ka gali kartaa si toos ah aad email, Google Plus ama Facebook.
Sida ay xafiiltamaan Spotify aysan u bixin kuwan raadkaygay ka Beatles ama hoggaamiyo Zeppelin.
Deezer aan la heli karin in Maraykanka.
No feature idaacada sida in Spotify iyo goobaha kale.
Boggan waxa uu yahay inta badan gaarka ah ee dhammaan dadka kale, laga yaabee badbaadin Soundcloud, maxaa yeelay this site tags isticmaalaan in ay sidoo kale isku dari Hababka music kala duwan haddii mid ka mid ah ayaa doonaya in la ogaado music cusub ama kaliya in la abuuro playlists ka xoogbadan. Waxaad dooran kartaa in ay dhagaystaan ​​playlist a pre-ka go'an ama la abuuro hal. Waxa kale oo aad ka qaadan kartaa sida waxa niyadda ama dareen, sida ku faraxsan yahay, murugo ama jacaylka ama sida ay mawduucyada.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn oo ku saabsan 8tracks waa in aad ku xidhan karto dadka kale bulsho ahaan iyada oo music by ay ogaadeen playlists ama faallo iyaga on.
No xayeysiis kalagoynta waayo-aragnimo music ah.
Waxaad ka boodin kara kuwan raadkaygay aad u tiro badan playlist kasta.
Ma waxay leeyihiin dareen isku mid ah bulshada bulshada sida Spotify, maxaa yeelay, idinku ma aad playlist la wadaag saaxiibadaada ka baxsan goobta.
Soundcloud talagalay dadkii badnaa hipster ah maxaa yeelay waxa ay u oggolaanaysa in magaciisa sidoo kale fursad u leh dunida oo dhan la wadaagno music.
Interface oo quruxsan oo minimalistic.
Great bulshada, iyadoo kooxo badan oo audiophiles in ay ka go'an in ay music.
Waxa lagu tiriyaa nidaamka comment halkaas oo dadka isticmaala hadli kartaa qeybo ka mid, lyrics ama garaaca in song kasta oo xilligan ku haboon.
Tusaale A weyn ee sida kala duwan Soundcloud waa in Spotify waa marka Amy Winehouse dhintay 2011. Muddo yar ka dib, duulankii sii daayay track baad ah laga helay oo keliya Soundcloud.
Haddii aad hankering u music asalka ah, ka dibna tanu waa madal; ama haddii aad u baadi kaliya ee qaar ka mid ah heesaha cusub ka dibna ka heli category ku habboon oo dhegahaaguna ha ogaado in aad music cusub jecel.
Soundcloud ayaa sidoo kale diyaar u ah Android telefoonada gacanta ama iPhone, iyo taageerada weyn.
Waxaad dhexgalaan kartaa SoundCloud waayo-aragnimo dhagaysto aad xisaabta Facebook gudahood, jidaynayey for saaxiibadaa si aad u aragto waxa aad dhagaysanayso, ama si ay u raacaan dhadhankii music aad.
Waxaad gali kartaa la xisaabtaada Google iyo Facebook, Spotify oo keliya kuu ogolaanaya in aad gasho leh account FB aad.
Qorshahaa waxa minimalist cabsiiyo laga yaabaa in qaar ka mid ah off.
Waxaad si fudud u abuuri karaan playlist mid ah fanaaniinta aad ugu jeceshahay by qoraal in magacyada ay fursad u raadinta. Waxaa uu leeyahay youtube ee database, oo waa weyn oo mar walba sii kordhaya.
Waa mid ka duwan aad u fiican oo shaqaynaysa in ay Spotify u baahan ma log-in ama downloads.
Si ka duwan Spotify, fanaaniinta cusub Waxaad gali kartaa ilaa 2 saacadood oo bilaash ah audio la'aan ah oo ku saabsan in soundcloud.
Soundcloud badan yahay aqbalay ee remixes iyo qalab kale, taas oo ku Spotify laga yaabaa in loo oggolaado on Spotify.
Mana aha rata ka farxin sida qaar ka mid ah adeegyada kale ee geeyo, oo ay ku jiraan Spotify.
Waxaa si fiican u shaqeeyo oo ku jira internetka oo ku saabsan arrimo la xayiraad qaar ka mid ah.
Shaqo raadinta waa mid aad u soo jiidata oo u oggolaanaysa in taageero hashtag, sidaas sahlaysa in la ogaado music cusub oo ka kooban.
App laga heli karaa arrimo radio Bulshada. Waxaana isticmaala gali kartaa GIFS kartoon ah oo sii qulquli ay radio bulshada ka MySpace, jidaynayey for discoverability dheeraad ah.
Waxaa ka dhiman yihiin fanaaniinta oolli-tan badan oo ka mid ah magacyada saxiixay jira xad aan la garanayn.
Of oo dhan u tartameen in Spotify, Grooveshark ayaa horjeeda ugu loo yaqaan iyo sidoo kale isagoo boosteejo ah oo aad la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farqi aad u weyn. Grooveshark uusan aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo software kasta si ay u sii qulquli music, midna waxaa ay model ku salaysan xayeysiis fahanka.
Intaas waxaa sii dheer, Grooveshark sidoo kale ku saleysan sida bulshada waxaa Spotify, halka jidaynayey u gaarka ah oo dheeraad ah.
Ma aha oo kaliya in aad dhegaysan kartaa music aad jeceshahay, laakiin waxaad dooran kartaa idaacadaha ama playlists dadka kale ee 'iyo sidoo kale la wadaago adiga kuu gaar ah.
Grooveshark sababtana fasiraad aan dhufto ee mobile.
Homepage waxay noqon kartaa yara clunky barbardhigo Spotify.
TunesGo - Spotify download iyo music geeyo free
Sida loo Guba Spotify in CD
Sida loo Beddelaan Spotify in MP3
> Resource > Spotify > barbardhig sare 7 Music Goobaha la Spotify